DOWNLOAD HALO 4 YSS-1000 Saber Starfighter FSX & P3D
Halo 4 no lalao video fahafito ao amin'ny laharana Halo. Ny YSS-1000 dia mpilalao haingam-pandeha milalao amin'ny lalao miaraka amin'ny fahaizana mahavariana! Tiavo ny tenanao mba hifehy ity milina ity izay afaka manatratra haingana haingana. Ny modely dia tena mendri-piderana amin'ny lalao, ny sary dia ny kalitao avo lenta, miaraka amin'ny vokatra "taorian'ny burners" sy feo mahazatra. teratany FSX/P3D
- dingana tokana, tany ahafahana miakatra FSX/P3D avo (10 tapitrisa ft)
- haingam-pandeha ambony miaraka amin'ny fanamafisana Mach 4.6 / 2666 kts (FSX/P3D max)
- Rob Barendegt tanteraka ny spacegauge v2.0 imbeded sy voaendrika
- Toerana gauges in VC ary koa ny windowed
- famarana mahazatra izay vakiana hatrany fsx/p3d hafainganam-pandehany sy haavo
- Miaraka amin na oviana na Altitude feno lateral mitsangana sy fanaraha-maso
- VC sy WSO virtoaly cockpits